October 24, 2021 - Channel Lover
ရန်ကုန်၊ လှိုင် RC2 တက္ကသိုလ်ဝင်းထဲတွင် ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီး ကားတစ်စီးကို စစ်ကောင်စီကား ၂ စီးက လိုက်လံ ပစ်ခတ် ဖမ်းဆီး
October 24, 2021 by Channel Lover
ရန်ကုန်၊ လှိုင် RC2 တက္ကသိုလ်ဝင်းထဲတွင် ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီး ကားတစ်စီးကို စစ်ကောင်စီကား ၂ စီးက လိုက်လံ ပစ်ခတ် ဖမ်းဆီး ရန်ကုန်၊ အောက်တိုဘာ ၂၄ ရန်ကုန်တိုင်း၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ RC2 တက္ကသိုလ်ဝင်းထဲတွင် ယနေ့ အောက် တိုဘာလ ၂၄ ရက်နေ့ နေ့လယ် ၁၂ နာရီ ၄၆ မိနစ်အချိန် ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားပြီး ကားတစ်စီးကို စစ်ကောင်စီ အရပ်ဝတ်စစ်သားများ လိုက်ပါသော ကား ၂ စီးက ညှပ်၍ ပစ်ခတ် ဖမ်းဆီးသွားကြောင်း မျက်မြင်တွေ့ရရှိသူများက ပြောသည်။ “ဖြစ်တာက ဒီနေ့ မွန်းလွဲ ၁ နာရီလောက်ပေါ့။ ကားတစ်စီးကို ပိတ်ပြီး ဖမ်းတယ်။ Alphard အဖြူနဲ့ အနက် ၂ စီးက … Read more
လူပျိုကြီးက ၁၅ နှစ်အရွယ်ကောင်မလေးကို ခိုးယူပြီး ကိုယ်ဝန်(၂)လနဲ့ ပစ်ထားခဲ့မှု
မြဝတီမြို့ အမှတ်(၅)ရပ်ကွက်၊ ရေပူအပိုင်ချစ်ကြည်ရေးတံတား အမှတ်(၂)အနီးနေထိုင်သူ တရားလို ဒေါ် ……. အသက်၄၆နှစ်သည် တူမဖြစ်သူမ … … . ၁၅နှစ်မှာနေအိမ်မှ ပျောက်ဆုံးသွားပါသဖြင့် လိုက်လံရှာဖွေရာ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှရှာဖွေမတွေ့ရှိရတော့ဘဲ တူမဖြစ်သူမှ စားသောက်စရာပိုက်ဆံပြက်နေကြောင်း ငွေကျပ်တစ်သိန်းပေးရန် ဆက်သွယ်လာသဖြင့် ငွေကျပ်တစ်သိန်းပေးမည်ဟုဆိုကာ ဖားချောင်းကျေးရွာအနီးချိန်ဆိုလိုက်တယ် ထိုသို့ချိန်ဆိုတွေ့ဆုံရာတွင် မ …. ၁၅နှစ်က အောင်ထွေးဆိုသူနဲ့ ခိုးရာလိုက်သွားကြောင်း သင်္ကန်းညီနောင်ရွာသစ် DKBA(၉၀၁)ဝန်းဟောင်းအနီး နေအိမ်တစ်အိမ်တွင် အတူတူနေထိုင်ခဲ့ရကြောင်း မိမိအားစတင်ခိုးယူပေါင်းသင်းစဉ် အောင်ထွေးအပြင်သွားသည့်အခါ မိမိအားအခန်းထဲတွင်ထားခဲ့ကြောင်း ယခုကိုယ်ဝန်၂လခန့်ရှိနေကြောင်း အောင်ထွေမှာလွန်ခဲ့သည့်၁ဝရက်ခန့်မှစ၍ အခန်းသို့ပြန်မလာတော့သည့်အတွက် စားဝတ်နေရေးအဆင်မပြေဖြစ်ကာ အဒေါ်အရင်းဖြစ်သူထံ ယခုလိုငွေကျပ်တစ်သိန်း ဖုန်းဆက်ခေါ်တောင်းရခြင်းဖြစ်ကြောင်း အောင်ထွေးဆိုသူမှာ လူပျိူ ကြီးဖြစ်ကြောင်းမ ….. ၁၅နှစ်က ဆက်လက်ပြောဆိုတယ် တူမဖြစ်သူအား အဒေါ်အရင်းမှ ညရနာရီအချိန်ဌားနေသည့်တန်းလျားမှ မိမိနေထိုင်ရာ ရေပူအိမ်သို့ပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လာခဲ့တယ် တရားခံအောင်ထွေးကို မ … Read more
ပါဝါရိန်းဂျား အညိုကောင်အဖြစ် ပြောင်းလဲသွားတဲ့ ဒေါ်ဝရဉာဏီ
ဘဝမှာ ပါဝါရိန်းဂျားအညိုကောင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ထင်မထားခဲ့ဘူး။ဆရာလေးက အစက ဆေးတွေနဲ့ ဆန်အဓိက လှူပေးနေတာပေါ့နော်။ ဒလန်ကြောင့် ကျောင်းမှာ လာဖမ်းခံရတော့ဆရာလေးကို စစ်သား၂ယောက်က တစ်ဖက်စီ လက်ဖမ်းဆွဲ ဒူးအတင်းထောက်ခိုင်းတော့တာပဲ။ ကိုယ်ကတော့ ဘာမှ မလုပ်ပါဘူး၊ ဘယ်သူနဲ့မှ အဆက်အသွယ်မရှိပါဘူး ငြင်းရတာလေ။ မရပါဘူး၊ သေနတ်ဒင်နဲ့ တစ်ချက်ထုခံရပြီး သက်န်းဆွဲချွတ်မယ် ဘာညာနဲ့ ဟောက်တာပေါ့။နောက်ထပ်သုံးယောက်က ကျောင်းထဲဝင်မွှေနေတာ။ ဆေးတွေ ဆန်တွေနဲ့ငွေသား သိန်း၂၀မြင်တော့ လောဘတက်ပြီး သိမ်းနေတုန်း ဘေးက စစ်သားသေနတ်က ဂျီးတတ်ကြီးမြင်လိုက်ရတော့ မကြောက်တော့ဘဲ ကိုယ့်လွတ်လမ်းကို အသာချောင်းနေလိုက်တယ်။ ကျောင်းဘေးမှာ လြှိုတဈခုရျှိပွီး အဲ့လျှိုအတိုင်းသွားရင် လမ်းမရောက်တာသိထားတော့ ပြေးဖို့ကြံပြီး ငြိမ်နေလိုက်တယ်။ခဏနေတော့ စစ်သားတစ်ကောင်က ဘယ်နားဘာဖွက်ထားသေးလဲ ဇွတ်မေးတော့တာဘဲ။ ဖုန်းလည်းတောင်းပြီး စစ်တယ်။ ကီးပက်ပဲပေးလိုက်ပါတယ်။ ဖုန်းမကိုင်တတ်ပါဘူး ဒကာတို့ရယ်၊ ဆရာလေးက ဘာမှမသိသူပါ ဆိုတာလည်းမရဘူး။ … Read more
(၇)ရက်သားသမီးများအတွက်၂၄.၁၀.၂၀၂၁ မှ ၃၀.၁၀.၂၀၂၁ ထိ တစ်ပါတ်စာ ဟောစာတမ်း
(၇)ရက်သားသမီးများအတွက်၂၄.၁၀.၂၀၂၁ မှ ၃၀.၁၀.၂၀၂၁ ထိ တစ်ပါတ်စာ ဟောစာတမ်း (၇)ရက်သားသမီးများအတွက်၂၄.၁၀.၂၀၂၁ မှ ၃၀.၁၀.၂၀၂၁ ထိ တစ်ပါတ်စာ ဟောစာတမ်း တနင်္ဂနွေ သားသမီးများအတွက် တစ်ပါတ်စာ ဟောစာတမ်း (၇)ရက်သားသမီးများအတွက်၂၄.၁၀.၂၀၂၁ မှ ၃၀.၁၀.၂၀၂၁ ထိ တစ်ပါတ်စာ ဟောစာတမ်း တနလာင်္ သားသမီးများအတွက် တစ်ပါတ်စာ ဟောစာတမ်း (၇)ရက်သားသမီးများအတွက်၂၄.၁၀.၂၀၂၁ မှ ၃၀.၁၀.၂၀၂၁ ထိ တစ်ပါတ်စာ ဟောစာတမ်း အင်္ဂါသားသမီးများအတွက် တစ်ပါတ်စာ ဟောစာတမ်း (၇)ရက်သားသမီးများအတွက်၂၄.၁၀.၂၀၂၁ မှ ၃၀.၁၀.၂၀၂၁ ထိ တစ်ပါတ်စာ ဟောစာတမ်း ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများအတွက် တစ်ပါတ်စာ ဟောစာတမ်း (၇)ရက်သားသမီးများအတွက်၂၄.၁၀.၂၀၂၁ မှ ၃၀.၁၀.၂၀၂၁ ထိ တစ်ပါတ်စာ ဟောစာတမ်း ကြာသပတေးသားသမီးများအတွက် တစ်ပါတ်စာ ဟောစာတမ်း (၇)ရက်သားသမီးများအတွက်၂၄.၁၀.၂၀၂၁ မှ … Read more
ဦးဇင်ဝိုင်း၊ လူမင်း၊ ပြေတီဦးနှင့် မင်းမော်ကွန်းတို့ကို ပြစ်တင်စကားပြောလာတဲ့ မင်းအုပ်စိုး
တော်လှန်ရေးသမား မင်းတို့က တော်လှန်ရေးလုပ်နေကြတာလား တောထဲသွားပြီး အိုက်တင်တွေလုပ် စတန့်တွေထွင်နေကြတာလားဟင် တောထဲမှာ လက်ထပ်ပွဲတွေလုပ်လိုက် မွေးနေ့ပွဲတွေလုပ်လိုက် သေနတ်တွေကိုင်ပြီး အိုက်တင်မျိုးစုံနဲ့ ဓာတ်ပုံတွေရိုက်လိုက်ကြနဲ့ အထူးသဖြင့် ရုပ်ရှင်မင်းသားဆိုတဲ့အကောင်တွေကိုပြောချင်တာပါ ဇင်ဝိုင်းနဲ့ မင်းမော်ကွန်းဆိုရင် ကိုဇင်ဝိုင်းက ပိုဆိုးပါတယ် နဝတခေတ် နအဖခေတ် တလျှောက်လုံး ရိုက်ခဲ့သမျှ နိုင်ငံတော်ကားတွေမှာ ဒီလူမပါတဲ့ကားဆိုတာ အင်မတန်ရှားပါတယ် စစ်အစိုးရကလုပ်တဲ့ ညစာစားပွဲတွေ ဆိုရင်လည်း ကိုဇင်ဝိုင်းမတက်တဲ့ ညစာစားပွဲဆိုတာ မရှိသလောက်ပါပဲ ပြီးတော့ လူမင်း ပရိတ်သတ်ကြီးသာ သတိထားပြီး ပြန်စဉ်းစားကြည့်မယ် ဆိုရင် စစ်အစိုးရလက်ထက်တလျှောက်လုံး ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ စစ်ကားမှန်သမျှ လူမင်း မပါတဲ့စစ်ကား မရှိသလောက်ပါပဲ ပြီးတော့ ပြေတီဦး ဒီကောင့်ဘဝစခဲ့ရတာ ဒါရိုက်တာဦးခင်ဇော် ရိုက်ကူးတဲ့ မြန်မာစာမြန်မာစကား ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းတိုလေးတွေမှာ ဝင်သရုပ်ဆောင်ရင်း စခဲ့ရတာပါ အဲဒီဇာတ်လမ်းတိုလေးတွေကို မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြားကနေ … Read more
သထုံတိုက်ပွဲတွင် စစ်ကောင်စီတပ်သား (၂၀) ကျော်သေဆုံးခဲ့သည့် (ရုပ်သံ)
သထုံ၊ ထုံးဖိုလေးကျေးရွာအနီးတွင် စစ်ကောင်စီတပ်နှင့် BGF ပူးပေါင်း စစ် ကြောင်းကို KNLA မှ မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်၊ စစ်ကောင်စီဘက်မှ ၂၀ ကျော် သေဆုံးဟုဆို (ရုပ်/သံ) ရုပ်သံကို အောက်ဆုံးတွင် ဖော်ပြထားပါသည်…။ ရန်ကုန်၊ အောက်တိုဘာ ၂၄ မွန်ပြည်နယ်၊ သထုံမြို့နယ် ထုံးဖိုလေးကျေးရွာအနီးအတွင် စစ်ရေးလှုပ်ရှားလာသော အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နှင့် BGF ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းကို KNLA တပ်မဟာ ၁၊ တပ်ရင်း ၂ တပ်ဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့မှ ယနေ့ အောက်တိုဘာလ ၂၄ ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး နှစ်ဖက်ပစ်ခတ်မှု အပြင်းအထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ကာ စစ်ကောင်စီဘက်မှ ၂၀ ကျော် သေဆုံးနိုင်ကြောင်း KNLA တပ် မဟာ ၁ သတင်းရင်းမြစ်ထံမှ သိရသည်။ “ဖြစ်တာကတော့ ပိန္နဲတောကျေးရွာနှင့် … Read more
Breaking News- ၈၈ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ဦးဂျင်မီရဲ့ စိတ်မကောင်းစရာ လက်ရှိအခြေအနေ
Breaking News- ၈၈ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ဦးဂျင်မီရဲ့ စိတ်မကောင်းစရာ လက်ရှိအခြေအနေ Breaking News- ၈၈ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ဦးဂျင်မီကို စစ်ကောင်စီက ဖမ်းဆီး၊ အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်နေရ ရန်ကုန်၊ အောက်တိုဘာ ၂၄ ၈၈ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး နွေဦးတော်လှန်ရေးတွင် ပါဝင် ဦးဆောင်နေသူ ဦးဂျင်မီကို ယမန်နေ့ညပိုင်း မြောက်ဒဂုံတွင် ဖမ်းဆီးသွားကြောင်း ဦးဂျင်မီ၏ဇနီးဖြစ်သူက လူမှုကွန်ရက်တွင် သတင်းထုတ်ပြန် ရေးသားထားသည်။ “23-10-21ရက်ညပိုင်းမှာ မြောက်ဒဂုံမှာ ကိုဂျင်မီ ကိုစကစ တွေဖမ်းဆီးသွားပါတယ်။ အသက်အန္တရယ်ကိုစိုးရိမ်ပါတယ်။ စကစ ဖမ်းဆီးမှု့နောက်ပိုင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခြေအနေ အားလုံးကိုတာဝန်ယူဖြေရှင်းရမယ်” ဟု ဇနီးဖြစ်သူ မနီလာသိန်းက လူမှုကွန်ရက်တွင် ရေးသားထားသည်။ ယမန်နေ့ညပိုင်းနှင့် ယနေ့ နံနက်အစောပိုင်းတွင် မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်၊ ပင်လုံအိမ် ရာအတွင်းသို့ စစ်ကောင်စီတပ်များက ဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီး ပစ်ခတ်မှုများ လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း၊ … Read more
အလှမယ် တစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့် ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ တောထဲမှာ စစ်သင်တန်းတွေ တတ်ရောက်နေတဲ့ မြတ်သီရိလွင်
အလှမယ် တစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့် ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ တောထဲမှာ စစ်သင်တန်းတွေ တတ်ရောက်နေတဲ့ မြတ်သီရိလွင် ပရိတ်သတ်ကြီးရေ အလှမယ်Bellaကို လူတိုင်းသိပြီးဖြစ်မှာပါ၊ သူမဟာ Miss Myanmar World 2016 Winner ဆုရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ ပြည်သူတွေနှင့်အတူ အမှန်တရားဘက်က ရပ်တည်ခဲ့တဲ့ အလှမယ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်၊ သူမရဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အပြုံးတွေကြောင့် ပရိတ်သတ်ကြား နံမည်ကြီးပါတယ်။ Missတစ်ယောက်အနေနဲ့ အနုပညာ လောကထဲရောက်လာခဲ့တဲ့ မြတ်သီရီလွန်ကတော့ ပရိသတ်အားပေးမှုရရှိခဲ့ပြီး အောင်မြင်နေတဲ့သူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာမြတ်သီရီလွန်ကတော့ ကြောငြာတွေနဲ့ သီချင်း MTVတွေ ဆက်တိုက် ရိုတ်ကူးလာခဲ့တာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း ပြည်သူတွေနဲ့အတူ အနုပညာရှင်တွေက လက်မခံဘဲ ဆန္ဒပြခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ မြတ်သီရီလွန်ကလည်း အမှန်တရားဘက်က ရပ်တည်ပေးခဲ့ပြီး နွေဦးတော်လှန်ရေးမှာ ပါဝင်ခဲ့တာဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ မြတ်သီရိလွန်က လွတ်မြောက်နယ်မြေကို … Read more
မန္တလေး မြို့ကြီးရေ အဲ့လောက်တောင် အခြေအနေဆိုးနေပြီလား….
မန္တလေး မြို့ကြီးရေ အဲ့လောက်တောင္မန္တလေး မြို့ကြီးရေ အဲ့လောက်တောင်အခြေအနေဆိုးနေပြီလားဟ ဒီနေ့( 23.10.21 )ကျောက်ဆည်ကမိဘမဲ့ကလေးကျောင်းကိုသွားလှုဖို့ အလှုလိုက်မယ့် စက်မှုထဲကသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကိုမနက် 4:30 လောက်သွားခေါ်တာအပြန် 58 လမ်း 118/119 ကြားမှာစောင့်ပြီးဆိုင်ကယ်လိုက်လုကြတယ် ။ ဆိုင်ကယ်3စီးကိုလူ7ယောက် ပါတယ် ကျွန်တော်တို့လဲ တွေ့တွေ့ချင်း ပြေးတာပေါ့ 118 ပေါ် ကနေ 120တစ်လမ်းလုံးလည်းအော်ပြီးအကူအညီတောင်းပေမယ့်တစ်ယောက်မှထွက်မလာကြဘူး အဲ့တာနဲ့ 48/49 120 ရောက်တော့ဆိုင်ကယ် လဲရော အရှေ့ကမောင်းတဲ့တစ်ယောက်ကိုဓားနဲ့ လှမ်းခုတ်ပေမယ် မထိလိုက်ဘူး ဆိုင်ကယ်မှောက်မှောက်ချင်း သုံးယောက်သားနီးရာလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထဲဝင်ပြေးတာအထဲလူတေထွက်လာလို့တော်သေးတယ် ကံကောင်းလို့မသေတယ် ပြောချင်တာက မနက်အစော တို့ ညမိုးချုပ်တို့ အပြင်မထွက်ကြပါနဲ့ ဖြစ်နိုင်ရင်နေဝင်သွားတာနဲ့အပြင်မထွက်ကြပါနဲ့ (ဆိုင်ကယ်လည်းပါသွားပါတယ်)မနက်။ 5:00 ကျော်ကျော်လောက်ကဖြစ်သွားတာပါ credit https://www.facebook.com/profile.php?id=100036972289495 unicode မန်တလေး မွို့ကွီးရေ … Read more
မိန်းမခိုးပြေးလာတာကို ကျောင်းကလက်မခံလို့ ဆရာတော်ကို ဓားနှင့်ခုတ်တဲ့သူ
မိန်းမခိုးပြေးလာတာကို ကျောင်းကလက်မခံလို့ ဆရာတော်ကို ဓားနှင့်ခုတ်တဲ့သူ အမှုဖြစ်စဉ်မှာ၂၃.၁၀.၂၀၂၁ရက်နံနက်၁၁နာရီအချိန်ခန့်တွင် ကိုနိုင်လင်း(၃၃)နှစ်၊ ကျဘမ်း၊ မင်းလမ်းကူးကျေးရွာ ၊ဖြူးမြို့နယ်နေသူမှကျောက်တခါးမြို့နယ် ၊တောကျွဲအင်းနယ်မြေရဲစခန်းသို့ ရောက်ရှိလာကာ ၎င်းကရဲစခန်း အနောက်မြောက် (၉) မိုင် (၂) ဖာလုံခန့်အကွာတောကျွဲအင်း(ခ)အောင်မြင်မြို့ကြာအင်းကုန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျိုင်းအုံကျေးရွာ၊ အောက်ကျောက်တက် ဘုန်းကြီးကျောင်းနေ အစ်ကိုဖြစ်သူ ဥူးဝေပုလ္လ (ခ) ဦးဝင်းသိန်း၊ သက်တော်(၄၃)နှစ်၊ ဝါတော်(၁)ဝါ၊ သံဃာ၊ ခန်းနေ ကိုယ်တော်အား တစ်ရွာတည်းနေစိုးသူ(၃၅)နှစ်၊ကယ်ရီမောင်းသူမှ ဓါးကုတ်ချွန်ဖြင့်ခုတ်သဖြင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာများရရှိမှုများဖြစ်သွားကြောင်းလာရောက်တိုင်တန်းခဲ့သည်ဟုသိရသည်။ တိုင်တန်းချက်အပေါ်အပေါ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များက စစ်ဆေးခဲ့ရာ၂၃.၁၀.၂၀၂၁ရက် နံနက်၈နာရီအချိန်တွင် ဉုးဝေပုလ္လ(ခ) ဦးဝင်းသိန်းသည်၎င်းနေထိုင်သောအောက်ကျောက်တက်ကျောင်းမှ အလယ်ကျောက်တက်ကျောင်းရှိဥူးစန္ဒိမာ(ခ)ဦးညွှန့်ရွှေ၊ သက်တော်(၅၆)နှစ်၊ ဝါတော်(၈)ဝါ ၊ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်ထံတရားတော်များအား ဖုန်းဖြင့်ကူးယူရန်သွားရောက်ခဲ့ပြီး ကူးယူနေစဉ် စိုးသူသည်ကျောင်းထိုင်ဆရာတော် ဥူးစန္ဒိမာ(ခ) ဦးညွှန့်ရွှေ၏ေ ကျာင်းတိုက်သို့ရောက်ရှိလာပြီး စိုးသူမှဦးစန္ဒိမာအား “တပည့်တော်မိန်းမခိုးလာတယ်၊ အရှင်ဘုရားကျောင်းမှာ တစ်ညတည်းလို့ရမလား၊”ဟုပြောရာ ဦးစန္ဒိမာမှ“ဒါကာမတွေနဲ့ကျောင်းနှင့်မအပ်စပ်ဘူး ၊ကျောင်းမှာတော့လက်မခံဘူး” ဟုပြောရာ စိုးသူမြှ … Read more